Maitiro ekudzima maratidziro uye kujeka mune macOS Yakakwira Sierra | Ndinobva mac
Imwe neimwe nyowani vhezheni yeMacOS inotipa mashandiro matsva, mamwe acho anogona kuisa timu yedu kune muganho, uye bhora bhora rinogona kuoneka pane kanopfuura kamwe chiitiko, zvichititungamira mukusuwa kwakakwana. Kana zvishandiso zvedu zvisiri zvitsva chaizvo, macOS inotipa akateedzana emabasa atinogona disable kuti ikurumidze kushanda.
Mumakomputa ayo asina kungove makore mashoma ekuzvarwa, asi zvakare huwandu hweyeuchidzo ye RAM hwakaganhurwa uye dhisiki rakaomarara, harisi rakasimba, zvinodikanwa kana kana gadzira akateedzana ekugadzirisa kuitira kuti kopi yedu yemacOS kuitira kuti mashandiro acho ave semvura sezvinobvira, mukati mezvinogona kupihwa nechikwata chedu.
Mifananidzo, senge transparencies, shandisa huwandu hukuru hwezviwanikwa kubva kuchikwata chedu, saka kana izvi zviri izvo, mashandiro acho akawandisa, zvichipa chiitiko chisina kunaka mushandisi. Kana iwe uchida kudzimisa iwo maficha uye sezvinei nekushandurwa kwekushanda kweMac yako kuti iwedzere kuyerera, saka tinotsanangura maitiro ekuzviita.
Bvisa mifananidzo uye pachena mu macOS High Sierra
Chekutanga pane zvese isu tinofanira kuenda Sarudzo dzesystem.
Mukati meSystem Preferences tinoenda kusarudzo dze Kuwanika.
Muchikamu chekuruboshwe, tinofanirwa kusarudza Screen.
Kudivi rerudyi, isu tinongofanirwa kudzima iwo matabo Deredza kujekesa y Deredza kufamba.
Kana tangovhara iyi menyu, zvese zvinojeka pamwe neanopenga anomira kuratidza, achitipa yakaoma interface uye zvishoma zvishoma aesthetics, asi ndiwo mutengo watinofanira kubhadhara kana tichida Mac yedu nerondedzero yakanaka, kuti tikwanise ramba uchimhanya sezuva rekutangaKana zvisiri, isu tinoronga kuwedzera timu mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzima maratidziro uye kujeka mune macOS Yakakwira Sierra
Google Imba uye Imba Mini inosvika kuSpain gore rese, seAmazon Echo